Uyisusa njani i-terminal yakho ye-Android ngeZ4root | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ingcambu Android, Ukusetyenziswa kwe-Android, Iiselfowuni
Le yeyona ndlela ilula kwaye ilula yokwenza fumana iimvume zengcambu Kwisiphelo sakho se-Android. I-Z4root, sisicelo ukuba ekuqaleni singafumana kwifayile ye- imarike, kwaye nditsho kwi imarike kuba yayirhoxisiwe ixesha eladlulayo, ndithetha ukuba sele ndibiza Play Store Akunakwenzeka ukufumana esi sicelo simahla.
Eli galelo libulela elona qonga liphezulu lophando kunye nophuhliso olukhoyo namhlanje, Ukusuka kwi-xdadevelopers Ndizisa kuwe Ukukhuphela ngokuthe ngqo yesicelo esimnandi sihambelana nenani elifanelekileyo le Iitheminali ze-Android.
Con Z4root, Siza kuncothula iiterminal ezininzi ze-Android ngaphandle kwesidingo sokufaka iikhowudi ezinzima okanye ukusetyenziswa iinkqubo ezinzima ukusuka yethu PC.
Kuya kufuneka sikhuphele kuphela usetyenziso kwikhonkco endilishiye ngasentla, ndikope kwimemori ngaphakathi nangaphandle Ukugcinwa kwefowuni yethu njengoko siyikhuphelileyo, yifomathi ye-apk okanye ulwandiso, kwaye uyifikelela nakweyiphi na Isikhangeli seFayile.
Ukuba i-terminal yethu ye-Android ibingenaye umhloli wefayile yemveli, sinokuzikhuphelela naziphi na iinkqubo ezininzi zasimahla zolu hlobo kwiVenkile yokudlala.
Ngaphambi kokufaka usetyenziso, kufuneka siqiniseke ukuba kwimenyu yokuseta, usetyenziso, sisebenzise ukhetho lwe Imvelaphi engaziwayo, emva koko siya kungena kwi phuhliso ibekwe kukhetho olufanayo lwesicelo, kwaye siya kuqalisa ukususa iibhagi kwi-USB.
Nje ukuba konke oku kwenziwe, kuya kufuneka sifake isicelo kuphela, siyiqhube kwaye silandele amanyathelo abonisiweyo, iya kuba kukucinezela nje iqhosha elithi Ingcambu.
Ngomzuzu nje uya kuba nesiphelo sakho Ingcambu Kwaye uya kuba umnini zonke iimvume eziyimfuneko yenza kwaye urhoxise ngendlela othanda ngayo.
1 Z4root IiTheminali eziXhasiweyo eziSisigxina
2 IiTheminali azingqinelani nenketho engapheliyo
Z4root IiTheminali eziXhasiweyo eziSisigxina
I-Samsung Galaxy S (Zonke ezahlukileyo)
Iqakamba uHuawei Wenyuka
UGarmin Asus A50
I-Motorola Milestone 2
I-Smartq v7 Android 2.1
IiTheminali azingqinelani nenketho engapheliyo
Umnqweno (ufuna nand ukuvula)
Umnqweno HD (ifuna nand ukuvula)
Evo (ifuna nand ukuvula)
G2 (ifuna nand ukuvula)
IArchos 70 (ayaziwa)
myTouch 3G (ayaziwa)
Ukuba i-terminal yakho ayikho kuluhlu unokuluvavanya ngaphandle kweengxaki ukuba usetyenziso Z4root Isebenza kwisiphelo sakho, ukuba bekuya kuba njalo kamva sazise ukuba sandise uluhlu lwezixhobo ezihambelanayo.
Khuphela - Z4root
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ingcambu Android » Qalisa isigxina sakho kunye neZ4root
Izimvo ezi-98, shiya ezakho
oku akusebenzi kum .. Ndine-xperia X10 kwaye xa ndivula i-app iyavala kwaye ithi ayiphenduli… ndinayo i-Android 2.3.3 .. kungenziwa ntoni?
Ndizamile ukuyisiphula neengcambu umlilo wasendle ogcina iorenji kwaye indigcina ndicinga kwaye ndicinga. Ngaba inokucinywa ngaphandle komngcipheko?
Ukuba ungayimisa, linda kancinci ukuze ubone ukuba iyazivalela na
Umbuzo omnye ndinesicombululo endingenakukwazi ukusiphula nangayiphi na indlela andinakucofa kube kanye kwaye ndingakhange ndizame indlela yeselfowuni kwaye indixelela ukuba (Ayiphumelelanga! Hayi - Fu goo—) Nasiphi na isisombululo nceda?
Ayisebenzi nam. I-Samsung Galaxy S, ene-2.3.6
Kwi-Samsung Galaxy S unayo:
Ifayile yeZ4root ondibonise yona ukusuka kwi-Android: ukuya kwisilumkiso sentsholongwane.
Ngokukodwa i-Android_dc.BJR kunye ne-Android_mc.AIZ
Ndiyisebenzisile kwizixhobo ezininzi kwaye akukho bungozi bentsholongwane, ndicinga ukuba ayisiyiyo i-app esemthethweni kwaye kukugqobhoza inkqubo yakho, intsholongwane oyifakileyo ayizukuthanda kakhulu.
molo ndizama ukuyifaka kodwa indixelela impazamo yohlalutyo
into yokulungisa le
Oko ayisebenzi kuhlobo lwakho lwe-Android
xa isithi "parse error" kungenxa yokuba ifayile ayigqibanga. Kuya kufuneka uyikhuphele kwakhona kwaye ngokupheleleyo ukuze ingakuxeleli loo nto. XD
Impazamo yokwahlulahlula ikwakhona xa ingahambelani nohlobo lwakho lwe-Android
Ngaba ikwi-Xperia Live Walkman ye-Android 2.3.4? ndicela umntu andiphendule 😀
Ndine-walkman v4.0.4 ephilayo kwaye ndiyayenza kodwa yayilayisha usetyenziso .. ndilindile
Uhambe njani ??? …… unga?
UEliecerchara 2 sitsho
Mholweni. Ammm. I-antivirus yam ithi usetyenziso lusulelekile .. .. Ngaba kuya kubakho enye iapp kungekudala? Enkosi
Phendula u-Eliecerchara 2
Ukutsiba kwe-antivirus kuyinto eqhelekileyo kodwa isicelo sicocekile
Nge-04/11/2012 ngo-19: 35, «Disqus» wabhala:
Ndiyayithanda iapp, kodwa kuthatha ixesha elide kwaye andikabi yingcambu! Kwakhona i-antivirus yam kukutshiza kunye nokuntywila. ngokubhekisele
Maizitho starkk sitsho
hey diskulpa, kwaye iluncedo nge-LG L5?
Phendula kuMaizitho Starkk
Ngaba unako kwi-Motorola Defy plus? D:
isetyenziselwa ukujikeleza i-lg e400
kwaye emva kokuba yenziwe, ufakelo luyahambelana kodwa andiboni ukuba yintoni umahluko ophuma kwingcambu yetempileni kunye nento esisigxina enjalo kodwa ke ayibuyi izokuvula inkqubo kunokuba icothe ifowuni ayitsho naliphi na inyathelo
Ndayifaka le nkqubo kwi-alcatel 990a yam kodwa andikwazi ukufumana ukuba iinkqubo zidluliselwe kwimemori yangaphandle. Ngaba umntu unokundixelela ukuba ndenze ntoni, ndiyazibulela izimvo zakho
Kuya kufuneka ukuba wahlule i-micro sd yakho kwaye uyithumele ngesicelo onokuyifumana kwiVenkile yokuDlala ebizwa ngokuba yiLinksd
Ayizukubakho ngenxa yokuba usenengxaki yokulungisa ukungasebenzi kwe-USB, xa uyisebenzisile awunakuchukumisa i-USB yakho, uyicime, kwaye unokuyisebenzisa kwakhona
ULieutenant Draza sitsho
Ndinengxaki, ngelixa bendigxotha i-Galaxy Pocket yam isicelo saphazamiseka kwaye ishukumisi siyangcangcazela rhoqo. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni?
Phendula uLieutenant Draza
Ewe ewe, ikwacotha kakhulu kwaye andinakukwazi ukufaka nasiphi na isicelo. Andikacimi iselfowuni, kuqala ndifuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni.
UAdrian oliviere sitsho
Umcimbi mdala noko kodwa kwenzeka into efanayo kum, ndiyazi ukuba ihleli kwi "Ukuzama ukungcangcazela iingcambu" kangangemizuzu eliqela mhlawumbi iiyure, emva koko ndiyaqala kwakhona kwaye ayenzeki. (Xperia x10 pro encinci)
Phendula uAdrian Oliviere
Ndizamile kwi-Huawei yam inyuka nge-Y100 okanye i-U8185, iyandihlawulisa kodwa ayiqali kwakhona. 🙁
kuthatha i-10 min ekusebenziseni ukuxhaphaza ukuze ufumane ukufikelela kwengcambu kuyinto eqhelekileyo ??? Ndimyekile aqhubeke ??
Kuthatha ixesha elingakanani ukuyingcambu? Kundithatha ixesha elide ukwenzeka kwimotorola yam ukuba silinde
Ndine-preng q yeengcambu ze-lg7.
ewe david sitsho
iyasebenza kwi-motorola xoom?
Phendula ku eweua david
Ndingayikhuphela njani ngqo kwiseli? Ndiyikhuphele emathangeni kodwa xa ndizama ukuyigqithisela kwimemori yecel ayivuli kuphela ithi impazamo ..
Molo, ndinayo i-motorola razr ene-android ics 4.0 kwaye kubonakala ngathi le nkqubo inentsholongwane kwaye indinika ithuba lokuyikhupha okanye ukuyishiya andazi ukuba ndenze ntoni
Ayiyintsholongwane, unokuqiniseka, ngayo yonke le nto inokungakusebenzeli ngenxa yemodeli yesiphelo kunye ne-firmware
I-Motorola razr xt910 ayisebenzi Android 4.0 ics
isebenza kwi-alcatel (890 ukubheka phambili) kuvavanyo lwe-mii .. kuphela kuthatha malunga nemizuzu engama-20 ...
Ukuba unayo nayiphi na intsholongwane efakiweyo, iya kuyibona njengesoyikiso .. kuba iapps ifuna imvume yokungena kule nkqubo .. Vala nje i-antivirus ngalo mzuzu… 😀
Umhlobo onakho kwi-hauwey u8665 yam okanye undixelele ukuba ndingaba ngumsebenzisi wengcambu njani ngale cel
Kwafuneka ndiyiphinde le nkqubo amatyeli aliqela kuba inkqubo yayizivala (okanye iselfowuni yam yayivale) kodwa ekugqibeleni yasebenza ngokugqibeleleyo.
Ndine-galaxi ace s5830m, iapp ifakiwe, ndiyisiphula kwaye ijinga okwethutyana kwaye ayenzi nto, iyalayisha nje… kutheni? yi-Android 2.3.6
Zama i-UnlockRoot, kwibhlog oneposti yokuba ungayisebenzisa njani.
Le nkqubo ineTrojan!
Ayinanto, i-antivirus iyifumana ngokungalunganga kodwa iyi-100 x 100 ethembekileyo.
Kodwa, ngenxa yokuba iTrojan indibhaqile, ndinike inkcazo yokuthatha igama lakho kuyo?
Ewe, andinalwazi, inyani kukuba nam ndiyisebenzisile amatyeli aliqela, kunye nenani elikhulu labasebenzisi, kuya kufuneka ujonge amagqabantshintshi
Mholweni!! Ndizama ukuncothula i-galaxy s kodwa xa ndingena kwisicelo (z4root) iyaqhubeka nokulayisha. umntu k ndincede nceda. Enkosi!!!
Ikhompyuter ayizukundivumela ndiyikhuphele kwaye andazi ukuba ndenze njani
Yenza i-antivirus isebenze kwaye unakho
Kulungile kwi-lg gt540 2.1
Inye indlela yokuphuma ngaphandle kwamathandabuzo kukuzama.
unakho kwi-huawei u8510
inokuba nayo ngeblu touch touch 7 kunye nethebhulethi nge-os 4.0.4
Ewe, isebenze ngokugqibeleleyo nge-Chinese mobile Y9300 + kwaye kungekudala ndiza kuzama i-Samsung Galaxy S SCL ...
Ngaba ikusebenzele ngee-sgs okanye awuzami? Ndizamile kodwa andifumani ngcambu kweso sicelo kwaye loo odin ayenzekanga
Ngaba ingasetyenziselwa i-samsung galaxy Y TV gt-s5367? kunye Android 2.3.6?
Ndincede nge-Samsung Galaxy S Advance?
Yeyiphi kwezi zimbini oyinika yona? kwi-Un-Root okanye kwi-Re-Root? Ukuze ube nakho ukuyisusa?
kutheni ingasebenzi kwigalaxis2 ..?
Kwi-Galaxy S2 ungayincothula usebenzisa i-Odin ngokukhuphela ifayile ye-cfroot ehambelana ne-firmware yakho.
Ndiyibona nge-motorola xt316 yam kwaye ayisebenzi
Ungandixelela enye indlela yokuyijikeleza, ndingavuya kakhulu ukuba ungandinceda
Ngaba ingcambu ye-lg optimus l9 p760 ene-jelly bean 4.1.2
Phendula kwi tofol
Andinanto kumthala wam we-AT & T
Ngaba i-olle ingaba kwi-motorola xt316 i-Android 2.3.4?
I-lg optimus vu inokugxilwa
Umbuzo we-Ua, ngaba ingcambu inokubangela oko kubizwa ngokuba likhefu kwimeko yokuhambisa ifayile ngokungalunganga?
Ndine motoluxe tx615 kwaye andifumani ndlela yokuyisusa ... ngale app ifowuni yam ibhalwe T_T
Nceda!! Sele ndizamile zonke izifundo kwinethiwekhi kwaye akukho nto i-T_T
molo ndijikeleza i-scl yam kwaye ndiyalayisha nje endiyenzayo
Ayisebenzi kwiOrange Montecarlo, ihlala izama ukuxhaphaza.
Ayisebenzi nge-AVVIO 760
intaba ...: P sitsho
Oonyana beebhetshi, iselfowuni yam ivinjiwe kwaye ayiqali ukuqala kwakhona, xa kusenziwa i-z4root.1.3.0 ... OS ulayishe iselfowuni yam, amaxoki obuxoki amaqhinga
Phendula kwi-volina ...: P
kwinguqulelo ye-4.0 yovavanyo lwe-x18i kernel 2.3
UAndrew: 3 sitsho
Molo mhlobo, ngaba ungandenzela into entle?
Phendula u-Andres: 3
UMauricio Toxqui Citalan sitsho
Umsebenzi we-acatel one touch 918a
Phendula uMauricio Toxqui Citalan
UDiego Fernando Krdenas Kno sitsho
le nkqubo iyakucima iifayile zam ezinjengeefoto kwaye?
Phendula u-Diego Fernando Krdenas Kno
Molo, ungayincothula ithebhulethi ye-HP Slate 7?. Ndilinde impendulo yakho.
Intsholongwane ye-AVG meda kwi-Z4Root yokukhuphela 🙁
Phendula kwi thorn
kum mini2 vaaa ????
Ndine-TYPE XPERIA kwaye andinakukwazi ukuyisusa kwaye ndizame yonke into (ssroot. Z4root.Unluckroot.Runme. Kwaye akukho nto iyandisebenzela) Nceda 🙁
Kwi-alcatel onetouch spop Android 4.1.1 iyasebenza?
Ndiyifakile kwisamsung gt-i5700L, ndaphinda ndayiqala kwakhona kodwa ayizukundivumela ukuba ndisebenzise kakhulu …….
Ndingathanda ukuyisiphula i-huawei inyuke i-g510 ye-jelly yebhontshisi nge-z4root kodwa andazi ukuba kunokwenzeka, ngaba sikhona esinye isicelo endinokusiphula
UCristian Andres Murcia sitsho
Esi siginali sive siyingcambu ngoncedo lwe-avvio 760
Phendula Cristian Andres Murcia
Ndifuna ukwazi ukuba ndiyincothula kanjani i-motorola razr i
Molo ndikhangela i-rom yemodeli yeselfowni e-atb 1108 yohlobo lwe-ekt, ngaba umntu angandinceda Bongoza i-T_T
Molo ngaba umntu angandinqwenela ukuba i-apk isebenza kwi-htc yomlilo wasendle?
Phendula kwi krauser
le esile ye-shit efuna ukukhohlisa bonke abasebenzisi be-android ukubeka iTrojan kwizixhobo zabo icwecwe lam laphuka kodwa ndiyibuyisela kwakhona
kwaye i-htc touch yam 4g iyasebenza
Ngethuba lokuqhuba ifayile, umyalezo we «Impazamo yohlalutyo» ibonakala «Kukho ingxaki yokuhlalutya iphakheji.
Ndidinga ukuyifaka kwiCoby KYROS MID7015-4G tablet.
Ukuba ungandinceda ndingakuxabisa kakhulu.
Molo, yeyiphi inkqubo endinokuyincothula i-w450 uriver P9.
Unokwenza ingcambu ngale sicelo kwi-alcatel touch enye kwi-906y
Isebenza kakuhle kwi-alcatel tpop 4010, okwesihlandlo sesihlanu isebenza oko ivaliwe ngaphambili
Molo, ndifuna ukwazi ukuba ikhona indlela yokuncothula isixhobo sam se-Android SGH-T399
Kwaye ndazama nge x4Root, i-farmaroot, i-master master, kwaye akukho namnye ndinokuyiphula, nge-z4Root ndamnika ingcambu esisigxina kwaye isikrini sasingenanto, andikwazi ukuqala okanye ukubuyela emva okanye ukuvimba okanye ukuvala okanye ukuqala kwakhona, kwafuneka ndikhuphe isixhobo sebhetri
Ndifuna uncedo nceda
I-PS: iphepha elihle kakhulu
I-WhatsApp ye-Android ifumana uhlaziyo